अभिनेता सोनु सूदले १२ करोड भारु खर्च गरेर ५० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिदिने :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अभिनेता सोनु सूदले १२ करोड भारु खर्च गरेर ५० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिदिने
स्वास्थ्यखबर बुधबार, वैशाख २८, २०७९, १७:०७:००
काठमाडौं- भारतीय अभिनेता सोनु सूदले विज्ञापनको पारिश्रमिकबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइदिने भएका छन्।
उनले एक अस्पातालको विज्ञापन गरेको पारिश्रमिकबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ५० जना बिरामीहरूलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइदिने बताएका हुन्।
मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि उनले विज्ञापनको १२ करोड भारु पारिश्रमिक सहयोग गर्नेछन्।
'एक अस्पताल मसँग काम गर्न चाहन्थ्यो। मैले अस्पतालको विज्ञापन गरेको पारिश्रमिकले ५० जनालाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थिए। ५० जनालाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा १२ करोड खर्च हुनेछ। अहिले दुई जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ। जो सायद यसको खर्च जिन्दगीभर उठाउन सक्दैनथे,' उनले भने। एजेन्सी
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भेटियो हालै वैज्ञानिकले ब्याक्टेरियाको एउटा नयाँ प्रजाति फेला पारेको छ। यो प्रजातिको ब्याक्टेरिया हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। १६ घण्टा पहिले
हैजासम्बन्धी समस्या पर्‍यो? ११८० मा फोन गर्नुस् १२ घण्टा पहिले
विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्याक्टेरिया भेटियो १६ घण्टा पहिले
बिना अप्रेसन कसरी निकालियो पेटभित्र अड्किएको चम्चा? १६ घण्टा पहिले
थप ४१ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित २०० नाघे १७ घण्टा पहिले
उपत्यकाका चार ठाउँको पानीमा हैजाको जीवाणु१९ घण्टा पहिले
पेटमा अड्किएको चम्चा नर्भिकका चिकित्सकले बिना शल्यक्रिया निकाले २२ घण्टा पहिले